Sinocare miaraka amin'ny Medlab Moyen Orient 2020-News-Sinocare
Sinocare miaraka amin'ny Medlab Moyen Orient 2020
Fotoana: 2020-02-11 Hits: 375
Changsha Sinocare Inc. dia nandray anjara tamin'ny MEDLAB Moyen Orient 2020 tany Dubai, teo anelanelan'ny 2/3/2020 ~ 2/6/2020.
MEDLAB dia fampirantiana malaza sy malaza indrindra nanatrika fampirantiana laboratoara sy diagnostika manerantany, ity fivorian'ny laboratoara fanao isan-taona ity dia nahasarika fampirantiana miisa 600 ary mpanatrika maherin'ny 25,000 avy amin'ny firenena 129+.
Sinocare dia manana traikefa 18 taona eo amin'ny R&D, ny famokarana ary ny fivarotana ny rafitra fanaraha-maso glucose ao anaty ra. Indrindra, nandritra izay roa taona izay, ny vokatra PCH 100 (Portable HbA1c Analyzer), PABA 1000 (ACR Analyzer) dia navotsotra tsikelikely teo amin'ny tsena iraisam-pirenena, tonga tsikelikely amin'ny orinasa POCT iraisam-pirenena i Sinocare.
Ao amin'ny MEDLAB 2020, Sinocare dia mitondra fanomezana lehibe roa hafa ho an'ireo marary mararin'ny diabeta sy aretina mitaiza hafa manerantany, antsoina hoe AGEscan sy iCARE-2000.
AGEscan dia vokatra farany glycation farany fluorescence detetor, amin'ny alàlan'ny scanner maso tsy manafika sy mandoko, aorian'ny 6 segondra afaka mahazo ny valiny, amin'ny faminavinana ny mety ho diabeta ao anatin'ny 5-10 taona ho avy. AGEscan dia safidy tsara ho an'ireo olona tsy voamarina fa voan'ny diabeta sy diabeta alohan'ny hanaovana diabeta mialoha, ary ho an'ny vondrona salama hitarika ny fanombanana ny aretina diabeta.
Ny AGEs dia singa pathogenika tsy miankina izay misy fiantraikany amin'ny fisehoan-javatra sy ny fampandrosoana maharitra ny diabeta izay misy ifandraisany amin'ny proinsulin / insuline. Rehefa mihalehibe ny taona, miangona tsimoramora amin'ny solomaso ny AGE, ary ny tahan'ny AGE dia hainganana amin'ny fanoherana ny insuline, ny fifehezana glucose manimba ary ny mararin'ny diabeta. Noho ny toetran'ny AGE milamina sy tsy azo ovaina dia manana "mémoire" ambony izy. Raha ampitahaina amin'ireo mari-pahaizana fanaraha-maso diabeta hafa, ny haavon'ny AGE ambony dia mety haneho ny fahasimban'ny siramamy ao anaty ra sy ny fihenjanana azo avy amin'ny oxidative mandritra ny fotoana lava kokoa. Izy io dia azo ampiasaina ho marika fampitandremana mialoha ny diabeta mialoha sy ny fahasarotana.
iCARE-2000 dia mpandinika multi-function automatique portable. Amin'ny ho avy, ny marary manana aretina madinidinika dia hampirisihina hitsidika ireo tobim-pitsaboana eo an-toerana hampihena ny enta-mavesatry ny hopitaly be. iPOCT dia hitranga tsikelikely any amin'ny hopitaly ambanivohitra sy ny tobim-pitsaboana ambaratonga eo amin'ny fiaraha-monina izay mety tsara hamaly ny fitakiana fanandramana ambany sy ny tsy fisian'ny mpiasa mahay.
iCARE-2000 amin'ny fampiasana teknolojia fototra misy ranoka izay afaka manao fampisehoana lehibe hahazoana antoka kokoa ny valiny. Raha ampitahaina amin'ny fitaovam-pitsaboana lehibe, ny iCARE-2000 dia manaisotra sasany, amin'ny alàlan'ny karatra reagent efa feno, manala ny tsiranoka mitondra ny fitaovana, ka tsy ilaina ireo singa mekanika sy tsiranoka tsy ifotony, ary mitazona ny fifehezana optika sy ny mari-pana. ny rafitra, amin'ny teny hafa dia tsy mila fanamafisana na ranoka fanadiovana. Ankoatr'izay, misy karatra reagent 16 miangona & 37 famantarana biokimika sy koagulasi fototra ho an'ny iCARE-2000, ary misy tondro maro kokoa ho an'ity karazana vokatra ity.
"Amin'ny alàlan'ny fitiavana dia manatsara ny kalitaon'ny fiainana ho an'ireo marary diabeta sy aretina mitaiza hafa isika." Nilaza ny filohanay, Andriamatoa Li.
Sinocare dia nanokatra fidirana vaovao amin'ny fitantanana diabeta manontolo, manome vokatra avo lenta avo lenta ary serivisy tsara indrindra no foto-kevitra fototra sy mitohy.
Pejy mialoha: Ny SAA & CRP dia mihatra amin'ny fisavana ny vaovao Virus pneumonia (NCP)
Pejy manaraka: Sinocare dia nanatrika ny fampirantiana 'China (Hunan) Equipment and Manufacturing Entry Cambodia Investment Expo'